कुन बार जन्मेका व्यक्तिहरुले कति सम्पति कमाउँछन् ? यस्तो छ भविष्यमा हुने रहस्य, हेर्नुहोस् तपाइको कुन बार ? – Dailny NpNews
कुन बार जन्मेका व्यक्तिहरुले कति सम्पति कमाउँछन् ? यस्तो छ भविष्यमा हुने रहस्य, हेर्नुहोस् तपाइको कुन बार ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ समय: १२:१८:५५
एजेन्सी , मानिसको जन्मबार र जन्मेको समय निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ र उसकाे जन्म कुन्डली जन्मबार र समय अनुसार निर्माण गर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्मेको बारलाई ग्रहले निकै प्रभाव पारेको हुन्छ। आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको भने सोमबार चन्द्र ग्रहको हो। मंगलबार मंगल ग्रहको हो भने बुधबार बुध ग्रहको हुन्छ। यस्तै बिहिबार वृहस्पतिको हुन्छ भने शुक्रबार शुक्र ग्रहको हुन्छ। शनिबारको कारक ग्रह पनि शनि नै हो । यसरी जन्मबार र समयलाई ग्रहले धेरै प्रवाभ पारेको हुन्छ ।ग्रहले आयआर्जनमा निकै प्रभाव पार्ने गर्छ।
सोमबार : बोलिमा निकै मि’ठास भएका व्यक्तिहरु सोमबार जन्मेका हुन्छन् । यस दिन जन्मने व्यक्तिको भागमा दुख सुख बराबर जस्तै हुने गर्छ । उनीहरुमा निकै कला गला शिक्षामा पनि अगाडी हुने भएकाले बहादुर हुने गर्छन् ।उनीहरुको लागि ९, १२, २७ वर्षमा निकै कष्ट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सोमबार जन्मने व्यत्तिलाई श्वासप्रश्वासको रोग लाग्ने सम्भावना रहेको हुन्छ।
मंगलबार : मंगलबार जन्मेका व्यक्ति निकै कठोर स्वभावका हुन्छन् । निकै भाग्यमानी र धनवान हुने गर्छन् । उक्त बार जन्मने व्यक्तिलाई छाला सम्बन्धी रो’गले स’ताउनेछ ।
बुधबार : बुधबार जन्मने व्यक्ति ध’र्म कर्ममा नि’कै विश्वास गर्ने गर्छन् । आफ्नो काममा धेरै चासो दिने भएकाले धन सम्पति क’माउन स’ञ्चय गर्न अरु भन्दा अगाडी रहेका हुन्छन्। यी व्यक्तिलाई ८ र २२ वर्षको उमेरमा निकै कष्ट गर्नु भएपनि जीवन सामान्य नै रहनेछ।
बिहिवार : यो बार जन्मने व्यक्ति निके वि’द्यवान हुने गर्छन् । ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षको उमेर सम्म यो बार जन्मने व्यक्तिलाई संकट पर्नेछ। ३० वर्षका उमेर कटेपछि यो बार जन्मने व्यक्तिको भाग्य फेरिने छ। उनीहरुले सोचेभन्दा बढी सम्पति क’माउने अवसर मिल्नछ ।